TRUECRYPT ကိုအခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
TrueCrypt ကို 7.2
အင်တာနက်ကိုလူတိုင်းမှာဖြစ်ပြီး, ဟက်ကာများတိုးပွားလာကြသောအခါယနေ့ခေတ်ကြောင့်ခိုးမှုနှင့်အချက်အလက်အရှုံးထဲကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အရေးကြီးပေသည်။ အင်တာနက်လုံခြုံရေးနည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးနှင့်သင်ပိုမိုအကြီးအကျယ်အစီအမံယူပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာ TrueCrypt ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့လက်လှမ်းမီကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
TrueCrypt ကို - ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုသင် encrypt လုပ်ထားကို virtual disk တွေအတွက် data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သူတို့ကသာမန် disk ကိုအဖြစ်နှင့်ဖိုင်အတွင်း၌ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးအတွက်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်သည့်အလွန်အသုံးဝင်သောလုံခြုံရေး features ရှိပါတယ်။
Volume Creation Wizard ကို
အဆိုပါ software ကိုခြေလှမ်းလုပ်ရပ်များအားဖြင့်ခြေလှမ်းများ၏အကူအညီဖြင့်သင်တို့ကိုစာဝှက်ထားတဲ့ volume ဖန်တီးနိုင်မယ့် tool တစ်ခုရှိပါတယ်။ အကူအညီဖြင့်, သင်ကဖန်တီးနိုင်သည်
encrypted ကွန်တိန်နာ။ က system အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့ဒီ option က, အရင်ကဆိုရင်နှင့်အတွေ့အကြုံအသုံးပြုသူများအတွက်သင့်လျော်သည်။ မိမိအသစ်ကိုအသံအတိုးအကျယ်၏အကူအညီရုံဖိုင်ထဲမှာနေသူများကဖန်တီးပြီးတော့ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မည်နှင့်အတူ, စနစ်သင်သည်သတ်မှတ်စကားဝှက်တောင်းလာလိမ့်မည်
ဖြုတ်သိုလှောင်ရေးကိရိယာ encrypted ။ ဤသည်ဂျဒေတာသိမ်းဆည်းဖို့ encryption ကိုကဒ်ပြားနှင့်အခြားခရီးဆောင်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ပါတယ်;
encrypted စနစ်။ ဒီ option ကအခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်သာအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်အကြံပြုသည်။ အပြေး OS ကိုစကားဝှက်များအတွက်သတိပေးခံရပါလိမ့်မည်သည့်အခါထိုကဲ့သို့သော volumes ကိုတီးပွီး။ ဤနည်းလမ်းကို operating system ကိုနီးပါးအများဆုံးလုံခြုံရေးပေးပါသည်။
သငျသညျစာဝှက်ထားတဲ့ကွန်တိန်နာဖန်တီးပြီးနောက်ကြောင့်ပရိုဂရမ်တွင်ရရှိနိုင် drives တွေကိုတတပ်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစတင်သည်။
ကျရှုံးခြင်း၏အမှု၌, သင်ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်လှိမ့်နိုင်ပြီးမူရင်းအခြေအနေမှသင့်ရဲ့ဒေတာကိုပြန်လာကြောင်းအလို့ငှာ, သင် recover ဖို့ drive ကိုသုံးနိုင်သည်။
လျှော့ချအချိန်များတွင် encrypted data တွေကိုဖိုင်များ access ကိုရဖို့ရန်အဓိကအခွင့်အလမ်းကို အသုံးပြု. အခါ။ အဆိုပါကီးဖိုင်မဆိုလူသိများပုံစံ (JPEG, MP3, AVI, etc) တွင်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးသော့ခတ်ကွန်တိန်နာကိုဝင်ရောက်သည့်အခါ, တက password ကိုဖိုင်အပြင်၌ဤ specify လုပ်ဖို့လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်ဤဖိုင်တွင်အသုံးပြု volumes ကို mount ဖို့သော့ဖိုင်ဆုံးရှုံးလျှင်, မဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်, သတိထားပါ။
သော့ချက်ဖိုင်များကို Generator ကို
သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖိုင်တွေသတ်မှတ်ချင်ကြပါဘူးလျှင်သင်သော့ချက်ဖိုင်တွေမီးစက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, program ကို mount ဖို့အသုံးပြုလိမ့်မည်တဲ့ကျပန်းအကြောင်းအရာနှင့်ဖိုင်တစ်ခုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျစနစ်ကစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့, အပြန်အလှန်, ထို program ၏အမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်သို့မဟုတ် streaming များ, parallelization များအတွက် hardware acceleration ကို configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူသင် encryption ကို algorithms ၏အမြန်နှုန်းစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စနစ်နှင့်သင်စွမ်းဆောင်ရည်၏ setting တွင်သတ်မှတ်ထားသောသော parameters တွေကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဒါဟာမရှိတော့ developer ကထောက်ခံလျက်ရှိ၏
အတော်များများက features တွေအရင်ကဆိုရင်ရည်ရွယ်ကြသည်မဟုတ်။
အထက်ပါအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ TrueCrypt ကိုမိမိအတာဝန်များကိုကိုင်တွယ်မှာအလွန်ကောင်းကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ် prying ကနေသင့်ရဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်ရန်ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်း။ သို့သော်အစီအစဉ်ကိုစတင်ဘို့အနည်းငယ်ကိုစိတ်ညစ်စရာထင်ရနိုင်ပြီး, ထို့အပြင် 2014 ခုနှစ်ကတည်းက developer ကမပံ့ပိုးပါ။
window.dll မရှိဘဲအမှား fix လုပ်နည်း Linux ကိုတိုက်ရိုက် USB ကဖန်ဆင်းရှင် UNetbootin PC ကို accelerator
TrueCrypt ကို - စာဝှက်ထားတဲ့ volumes ကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကဒီဆော့ဖ်ဝဲ။
ရေးသားသူ: TrueCrypt ကို Developers အစည်းအရုံး
ဗီဒီယို Watch: AirPods 2: Literally Everything New! (အောက်တိုဘာလ 2019).